သစ်တုံး လူသား – မြန်မာသတင်းစုံ
နှစ်ယောက်သား မအောင့်အီးနိုင်တော့သည့် အလား အိမ်ထဲရောက်သည်နှင့် တစက္ကန့်မျှ မဆိုင်းဘဲ ကိုလတ်က မဝေ ကို သိမ်းကြုံး ဆွဲဖက်ရင်း ပါးစပ်က တတွတ်တွတ် “မဝေ မဝေ၊ ငါ ဟာ ငါ၊ နင့်ကို တွေ့လိုက်တာနဲ့ မနေနိုင်တော့ဘူးဟ၊ ဟိုနေ့ နင်နဲ့ တွေ့ပြီးကတည်းက ငါ ငါ နေလို့ မရတော့ဘူး” ဒီစကားကိုဘဲ ရှေ့နောက်ပြောင်းကာ ထပ်ခါ ထပ်ခါ ပြောရင်း မဝေ မျက်နှာကို တရှုံ့ရှုံ့ဖြင့် အငန်းမရ လိုက်နမ်း နေသည်၊ မဝေကလဲ ခေါင်းမော့ကာ ကိုလတ် အနမ်းကို မျက်စိ မှိတ် ခံရင်း “ငါလဲ ဒီလိုပါဘဲ ကိုလတ်ရာ၊ နင့်ကို တွေ့လိုက်တာ အရမ်းပျော်သွားတာ၊ ငါ့ စိတ်ထဲမှာ အချိန်တော်တော်ကြာ ပျောက်နေတဲ့ ဆန္ဒတွေ ပြန်ပေါ်လာတာ၊ နင်ကလေ နင်က ငါ့ကိုအရမ်းဆွဲဆောင်နိုင်တာ” စိတ်ထဲက ဖြစ်နေသည့် ဆန္ဒကို ထပ်ခါ ထပ်ခါ ကိုလတ်နဲ့ လုပြောရင်း တယောက်ကို တယောက် တင်းတင်း ဖက်ကာ အပြန်အလှန် အငန်းမရ နမ်းနေရင်းမှ “ငါလဲ နင့်လို ပါဘဲဟာ၊ ဟာ မရတော့ဘူး မရတော့ဘူး၊လုပ်တော့ ဟာ လုပ်တော့၊ ငါ ငါ အရမ်းထန်နေပြီ” ကိုလတ်က ပြောပြောဆိုဆို သူ အင်္ကျီ ကို ကမန်းကတမ်း ဆွဲချွတ်ပြီး မဝေကို အခန်းထဲ ဆွဲခေါ်သွားသည်။ “ကိုလတ် . . . . အဝတ်စတွေရော ဘယ်မှလဲ၊ နင် အဆင်သင့် လုပ်ထားလား” မဝေ အမေးကို ကိုလတ်က “အင်းပါ၊ အဲဒါ မပါဘဲ နင့်ကို လုပ်လို့ရမှ မရတာ၊ ဟိုမှာလေ” ကိုလတ် ပြရာ လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ အိပ်ယာဘေး စားပွဲပေါ်မှာ အနက်ရောင် ခပ်ရှည်ရှည် အဝတ်စ ၂ စ၊ “နင် အရမ်း ထန်နေပြီလား ဟင် ကိုလတ်” မျက်နှာချင်းဆိုင် မတ်တတ်ရပ်ရင်း အပေါ်ပိုင်း ဗလာ ဖြစ်နေသော ကိုလတ် ရင်အုံကို မဝေ က လက်နှစ်ဖက်ဖြင့် ခပ်ဖွဖွ ပွတ်ကစားကာ နှာသံပါပါ ခပ်တိုးတိုးလေသံဖြင့် မေးလိုက်သည်။ “ဟင်းးးးအင်းးးးငါ ငါ နင့်ကို မြင်ကတည်း ထန်နေတာ မဝေရာ၊ နင်ရော ဟင်” “အင်း ငါရောဘဲ၊ ကိုလတ်ရာ မနေနိုင်တော့ဘူး အရည်ကို တစိမ့်စိမ့် ထွက်နေပြီ၊ ငါ လေ ငါ၊ နင် နဲ့တွေ့မှ ဘဲ အဲလို ဖြစ်တာ၊ တကိုယ်လုံးကို ရွနေတာဘဲ” “ဒါဆိုလဲ လုပ်လေဟာ၊ ဘာလုပ်နေတာလဲ၊ ငါ မနေနိုင်တော့ဘူးဟ” “အင်း . . လာ” မဝေက ပြောပြောဆိုဆို သူအရင်ကတည်းက လုပ်နေကျ အတိုင်း လက်ထဲက အဝတ်စဖြင့် ကိုလတ် မျက်လုံးကို ပိတ်အောင် ခပ်တင်းတင်း စီးလိုက်သည်၊ မျက်စိ ကို စီး ပြီးသည်နှင့် ကိုလတ်က အလိုက်တသိ သူ့ လက်နှစ်ဘက်ကို ပူးပြီး ရှေ့ကို တိုးပေးသည်။
ဒီရက်ပိုင်း မြန်မာအသစ်တွေက ​တော့ နေ့စဉ်ကိုထွက်နေတာဗျ။ အရင်ကချိန်းမ ​တွေရဘဲ အိမ်တွင်းအောင်းတွေ ခုမှ အပြင်ထွက်ပြီးကဲနေကြတာဗျို့။ ကဲ App မှာတော့ ထုံစံအတိုင်းလင်းပြီဗျာ။ 👇👇👇👇👇👇👇 ကြည့်မယ်ဆိုရင် အောက်က ပုံလေးကို နှိပ်ပြီး ဒေါင်းလိုက်နော်
App ဒေါင်းရန် Link
ထိုးပေးသော လက်နှစ်ဘက်ကို နောက် အဝတ်စ တခု ဖြင့် မဝေက တင်းကြပ်အောင် ချည်ကာ ကိုလတ်ကို အနားက ကုတင်ပေါ် တွန်းချ လိုက်သည်။ ပက်လက်လဲသွားသော ကိုလတ်က ချည်ထားသော သူ့လက်နှစ်ဘက်ကို ခေါင်းပေါ် မြှောက်တင်လိုက်သည်။ “ပြောစမ်းဟာ ကိုလတ်၊ ပြောစမ်း နင် ငါ့ကို အခု ဘာလုပ်ချင်နေလဲ” “ငါ ငါ အခု နင့် စောက်ရည်တွေ တဝ ယက်ချင်တယ်ဟာ” “ဟင်း ဟင်း ဟင်း ဟင်း၊ ကြိုက်တယ် ဟုတ်လား ကိုလတ်” ပါးစပ်က ပြန်မဖြေဘဲ ခေါင်းတညှိမ့်ညှိ့် ဖြစ်နေသော ကိုလတ်ကို မဝေက တဟင်းဟင်း ရယ်ပြီး ကြည့်ရင်း သူ့ အဝတ် အစားများကို အကုန် ချွတ်ချလိုက်သည်၊ ပြီးတော့ ကုတင်ပေါ် ပက်လက် လဲနေသည့် ကိုလတ် ဘောင်းဘီမှ ခါးစကို ဆွဲကာ ခါးပတ်ခေါင်းကို ခပ်ကြမ်းကြမ်းဆွဲဖြုတ်လို့ ကြယ်သီးနဲ့ ဇစ်ကို ဖြုတ်ကာ ခြေထောက် အစ မှ ကိုင်ပြီး ဆွဲချွတ်လိုက်သည်။ကိုလတ်က အလွယ်တကူ ကျွတ်သွားအောင် အလိုက်သင့် ခါးကော့ပေသည်၊ ဘောင်းဘီကျွတ်သွားတော့ မှ မဝေက ကုတင်ဘေးရပ်လျှက်မှ ခါးကုန်းကာ လက်တဖက်က ကုတင်ကို ထောက် လက်တဖက်က အတွင်းခံ ဘောင်းဘီ အောက်မှ အတင်းရုန်းကန်နေသည့် ကိုလတ် လီးကို ဘောင်းဘီပေါ်မှ လက်ဖြင့် ခပ်ဖွဖွ ပွတ်စမ်းရင်း “ဟင်း ဟင်း ဟင်း ဟင်း နင် အရမ်း ထန် နေပြီ ကိုလတ်၊ တင်းပြီးတော့ကို မာထောင်နေတာ” “ထန် နေပါတယ် ဆိုမှ နင်ကလဲ ငါ့ကို လာကလိနေတယ်၊ လုပ်မှ သာလုပ်စမ်းဟာ” “လုပ်မှာပေါ့ဟ နင်ကလဲ၊ ငါက နင့်ထက်တောင် ပိုထန် နေတာ၊ သေချာ ကြည့်ပရစေအုံး နင့်လီးကို၊ ငါ မမြင်တာ ဘယ်လောက်ကြာပြီလဲ” ပြောပြောဆိုဆို အတွင်းခံ ဘောင်းဘီအောက်မှ အတင်းရုန်းနေသော ကိုလတ်လီးကို ပွတ်ကကစားနေရာမှ လက်နှစ်ဘက်ဖြင့်တဖြေးဖြေး ဆွဲချွတ်လိုက်ပြီး ငေါက်ကနဲ ပေါ်လာကာ တယမ်းယမ်း ဖြစ်နေသော လီးကို ဖမ်းဆုတ်ရင် ခပ်တင်းတင်း ညှစ်ကာ အားမရသလို သူ့ အောက်နှုတ်ခမ်းကို သူ့ အပေါ်သွားဖြင့် ကိုက်ရင်း လေးငါးဆယ်ချက် ခပ်သွက်သွက် ထုကစား ကာ စိမ့်ထွက်လာသော အရည်ကြည် လျှာဖျားဖြင့် အသာတို့ရင်း နှုတ်ခမ်းဖြင့် ခပ်ကြာကြာလေး ပြွတ်စ် ကနဲ ဆွဲ စုတ်လိုက်သည်။
“နင့် လီးက အရင်အတိုင်းဘဲဟာ၊ ငါ အရမ်းကြိုက်တယ်” စိတ်ထဲက မအောင့်နိုင်ဘဲ ထွက်လာသောလေသံဖြင့် နှာသံ ပါပါ စကားသံက မဝေ နှုတ်ခမ်းက ထွက်လာသည်။ ကိုလတ်က မနေနိုင်သလို လေသံဖြင့် “အားးး မဝေရာ၊ နင် ကလဲ၊ လာစမ်းပါဟာ ငါ့ ပေါ်ခွစမ်းပါ၊ ဘာလုပ်နေတာလဲ၊ ငါ ဒီမှာ စောက်ရမ်းယက်ချင်နေပြီ” “လာမှာပေါ့ဟာ ကိုလတ်ရာ၊ ငါကလဲ ဒီမှာ အယက်ခံချင်တာ အရည်ကို တောက်တောက်ကျနေပြီ၊ အလယ်ကို တိုးဟာ” မဝေက ကိုလတ် ကိုယ်ကို ကုတင် အလယ်ကို ရောက်အောင် တွန်း သလို ကိုလတ်ကလဲ အလိုက်သင့် ကိုယ်ကို တွန့် ကာ ရွှေ့သည်၊ အလယ်ရောက်သွားမှ မဝေက ကိုလတ်ခါးပေါ်ခွလိုက်ပြီး ခါးကုန်းကာ ကိုလတ် နှုတ်ခမ်းကို သူ့လျှာဖြင့် လှမ်းယက်လိုက်သည်။ကိုလတ်က အလိုက်သသိ သူ့လျှာကို ထုတ်ပေးသည်၊ ထုတ်ပေးသည့် ကိုလတ်လျှာကို မဝေက မစုတ်၊ သူ့လျှာဖြင့် ယက်ကာ တဖြေးဖြေး လျှာ ထိပ်ဖြင့် နှုတ်ခမ်းမှ မေးစေ့၊ မေးစေ့မှ လည်စေ့၊ လည်စေ့မှ ရင်ညွန့်ထိ တဖြေးဖြေး အောက်ကို လျှာဖြင့် ယက်ချ လာသည်။ ကိုလတ်က အောက်မှ တဟင်းဟင်း ဖြင့် ညီးညူကာ ဖီးတက်နေရင်း “လုပ်ပါတော့ မဝေရာ လုပ်ပါတော့ ငါ့ မျက်နှာပေါ် ခွစမ်းပါဟာ” “ရော့ ဟာ ရော့ နင် ဒီလောက်လိုချင်နေတာ” လျှာတန်းလမ်းထုတ်ကာ တောင်းတနေသော ကိုလတ် မျက်နှာပေါ်ထိ ရောက်အောင် ဒူးထောက်လျှက် တိုးပြီး မျက်နှာပေါ် သူ့ စောက်ဖုတ် ရောက်လာသည်နှင့် ကိုလတ် မျက်နှာနားထိ ထိလုမတတ် ကပ်ခါ “ကိုလတ် ငါ့ စောက်ဖုတ် အနံ့ကို ရှုဟာ၊ ဘယ်လို လဲ အရင်လိုဘဲလား၊ နင်ကြိုက်သေးလား ပြောစမ်း” ကိုလတ်က အသက်ပြင်းပြင်း ရှုသလို တရှုးရှုးဖြင့် ရှုရင်း “ဟား လွမ်းနေတာ မဝေရာ လွမ်းနေတာ၊ ဒီ စောက်ပတ် အနံ့ကို ငါ လွမ်းနေတာ နှစ်ပေါင်း မနဲဘူး မဝေရာ၊ နင့် စောက်ပတ်က အရမ်း ရှုလို့ ကောင်းတာဘဲ၊ ငါကြိုက်တယ်၊ နဲနဲ ကပ်အုံးဟာ၊ ငါ့ နှာခေါင်းနဲ့ ထိအောင် ကပ် . . ကပ်” “ကြိုက်လား ကိုလတ်၊ ကဲ ရော့ ရော့ ရှုဟာ ရှု တဝရှု” မဝေက သူ့ စောက်ပတ်ကို ကိုလတ် နှာခေါင်းနှင့် မထိတထိ ဖြစ်နေအောင် ကပ်ပေးရောက ဖိချလိုက်သည်။ ကိုလတ်ဆီက ဝူးဝူးဝါးဝါး ဖြင့် အသံထွက်လာကာ လျှာက မလတ်စောက်ဖုတ်ထဲ တိုးဝင်လာသည်။
မလတ်က အရှိန်ရသလို သူ့စောက်ဖုတ်ဖြင့် ကိုလတ် ပါးစပ်နဲ့ နှာခေါင်း တဝိုက် ခါးကို ကစားပြီးရှေ့တိုး နောက်ငင် လှုတ်ရှားပေးနေသည်၊ စကားသံတွေ တိတ်သွားတာ တဟင်းဟင်း ညီးသံနှင့် နှာမှုတ်သံတွေ ပြင်းထန်လာသည်။ “အား အား ကိုလတ် ကိုလတ် ကြိုက်လား ကြိုက်လား ငါ့ စောက်ရည် အရသာ ရှိလား နင် ကြိုက်တုန်းလား” “ဝူး အူး အင်း ဝူး” ကိုလတ်ဆီက မပီမသ အသံ ထွက်လာပေမဲ့ ဘာပြောမှန်း မဝေ ကောင်းကောင်းကြီး နားလည်လိုက်သည်။ “အား ကောင်းတယ် ကိုလတ်၊ ဖိထိုး ဖိထို နင့်လျှာနဲ့ အဲ့နေရာ ဖိထိုး၊ အား အား ကောင်းတယ် ကောင်းတယ်၊ ငါ ပီးတော့မယ်ဟ၊ ဖိ ထိုး ဖိ ထိုး၊ ငါ ငါ နင့် ပါးစပ်ထဲ အရည်တွေ ညှစ်ချမယ်၊ ဖိထိုး ဖိထိုး အား အား အား အား . . . . ဆင်းပြီ ဆင်းပြီ ငါ့ အရည်တွေ ဆင်းကုန်ပြီ. . အား အား . . .ပီးပြီ ပီးပြီ . . ကိုလတ် ကိုလတ် . . . ကောင်းလား ကောင်းလား၊ အရသာ ရှိလား . . အားးးးးး” မဝေ ကော့လန်ကာ ကိုလတ်ပါးစပ်ကို သူ့ စောက်ဖုတ်ဖြင့် အတင်းဖိရင်း အား ကနဲ အသံရှည်ကြီးဖြင့် အားရပါးရ အော်ရင်း သူ့ သုတ်ရည်တွေ ကိုလတ် ပါးစပ်ထဲ ညှစ်ချလို့ တချီ ပြီးသွားကာ စောစောက ပြင်းပြင်းထန်ထန် လှုတ်ရှားမှု့တွေ တဖြေးဖြေး ညိမ်က ပျော့ကျသွာသည်။ ပျော့ကျသွားသည်နှင့် မဝေက သူ့ စောက်ဖုတ်ကို ကိုလတ် မျက်နှာပေါ်မှာ ခွာကို ကိုယ်ကို နောက်ဘက်တိုးရင်း ဘိုက်ပေါ်ခွပြီး သူ့ကိုယ်ကို ကိုလတ် ပေါ် မှောက်ချပြီး သူ့ လက်နှစ်ဖက်ဖြင့် ကိုလတ် မျက်နှာကို ညှပ်ကိုင်ကာ မျက်နှာချင်း ကပ်လို့ ကိုလတ် နှာခေါင်း နှင့် ပါးစပ် တဝိုက် ပေနေသော သူ့ စောက်ရည် တွေကို သူ့လျှာ ဖြင့် လျှောက်ယက်ကာ သန့်ရှင်းရေး လုပ်ပေးနေတော့သည်။
မောမောနှင့် ခနမျှ နှစ်ယောက်သား ခန မျှ ငြိမ်သက်သွားပြီးနောက် “ဘယ်လိုလဲ ကိုလတ်၊ ကြိုက်တုန်းဘဲလား” “ကြိုက်တယ် မဝေရာ၊ အရမ်းကြိုက်တယ်၊ ငါ အဲဒီ အရသာကို လွမ်းနေတာ ကြာလှပြီ၊ လုပ်စမ်းပါအုံးဟာ ငါ မပီးသေးဘူးဟ” “ဟင်း ဟင်း ဟင်း ဟင်း . . . လာမယ်လေ၊ ငါလဲ မ၀သေးပါဘူးဟ၊ ပီးသာပီးသွားတာ နင့် ကို လိုးမှ မလိုးရသေးတာ၊ ဘယ်ဝ မှာလဲ၊ နင့်ကို ငါက တက်လိုးရမှ ၀ မှာ” “နေအုံး နေအုံး ခု မလိုးနဲ့အုံး၊ ခုလိုးရင် ငါ ကြာကြာထိမ်းနိုင်မယ် မထင်ဘူး၊ ခုတောင် တင်းပြီး အရည်တွေ အ၀တေ့နေပြီဟ၊ ပီးချင်နေပြီ၊ စုတ်ဟာ ငါ့ကို ပီးအောင် အရင်စုတ်၊ နင့် ပါးစပ်ထဲ ငါ တချီ အရင်ပီးမယ်။ နောက် တချီပြီးမှ အားရပါးရ အကြာကြီးလိုးဟာ” “အင်းပါဟ၊ ငါသိပါတယ်၊ နင့်လီးကို မြင်ကတည်း စုတ်ချင်နေတာ၊ နင်က ငန်းငန်းတက် ငါ့ကို ယက်မယ် အော်နေလို့၊ ခု ငါ့ နို့သီးလေး စို့မလား” “အင်း စို့မယ်” မဝေက ကိုလတ်ပေါ် အိပ်နေရာက ကုန်းထကာ လေးဘက်ထောက်ရင်း တွဲလောင်းကျနေတဲ့ သူ့ နို့သီးကို ကိုလတ် ပါးစပ်ပေါ် တင်ပေးလိုက်သည်၊ ကိုလတ်က ပါးစပ်ကို လို့ လှမ်းငုံရင်း ပူးချည်ထားသော သူ့လက်က အလိုလို ကြွလာကာ မဝေ နို့ကို ကိုင်ဘို့ အားယူလိုက်သည်။ မဝေက ကြွလာသော ကိုလတ်လက်ကို သူ့လက်ဖြင့် ပြန်တွန်းချရင်း “ဘာမှ လာထိဘို့ မကြိုးစားနဲ့ နော်ကိုလတ်” “ငါ ငါ အားရပါးရ ညှစ်ပြီး စို့ချင်တာ မဝေရာ” “တော်စမ်းပါ၊ ဘာ ညှစ်ချင်တာလဲ၊ မကိုင်နဲ့၊ ကိုင်ပြီးရင် နင်က ကြီးတယ်လေး၊ သေးတယ်လေး၊ မာတယ်လေး၊ ပျော့တယ်လေးနဲ့ နင့် ဆန္ဒ ပြည့်သွားရင် နင် မကြိုက်တာ တခုခု ဖြစ်ပြီ၊ ငါသိတယ်၊
နင့်ဖာသာနင် အောက်က သစ်တုံး လိုနေ၊ ငါ လုပ်တာ ခံ၊ လိုချင်တာ တောင်း၊ နင့်ကို ငါလုပ်ပေးမယ်” “အေးပါဟာ အေးပါ၊ နဲနဲလေး အောက်ဖိဟာ၊ ခု အဖျားလေးဘဲ မိနေတာ” “ရော့ ရော့ စို့ဟာ စို့၊ လျှာ နဲ့ လှိမ့်ဟာ၊ အင်း အင်း . . စို့ဟာ၊ သွားနဲ့လဲ မနာအောင် ကိုက်ဟာ၊ ပြီးရင် ငါ့ နို့နဲ့ နင် ရင်ဘတ်ကိုလဲ ပွတ်ပေးမယ်၊ နင့် လီး ကိုလဲပွတ်ပေးမယ်၊ နင် ကြိုက်တယ် မို့လား” မဝေက ပြောလဲပြော သူ့ နို့အုံ ၂ ဖက်ကို တလှည့်ဆီ ကိုလတ် ပါးစပ်ပေါက် ရှေ့ ချပေးနေသည်။ ပြီးတော့မှ သူ့ နို့သီးနဲ့ ကိုလတ် တကိုယ်လုံးကို ဒရွတ်တိုက် ပွတ်ရင်း တဖြေးဖြေး နောက်ကို ရွှေ့လာကာ ထောင်မတ်နေသော ကိုလတ်လီးကို သူ့ နို့နှင့် တိုက်ကစားနေရာမှ သူ့ ကိုယ်ကို ပေါင်ကြားထဲ လျှောချကာ လျှာ နဲ့ ထိထိမိမိ ယက်လိုက်သည်။ “အားးး မဝေ” ပါးစပ်က အားကနဲ အော်ရင်း ကိုလတ် အောက်ပိုင်က ကော့တက်လာသည်။ မဝေက ဆက်မလုပ်တော့ဘဲ ပေါင်ကြားထဲ ခေါင်းထိုးကာ တွဲလောင်းကျနေသော ဥ တလုံးကို လှမ်းဟတ်လိုက်သည်။ “အား” အော်ရင်း ကိုလတ် ကော့တက်လာပြန်သည်။
ဥ ကို ဆွဲကိုက်ရင်း လီးတံ ကြီးကိုသူ့ နှာခေါင်းဖြင့် ပွတ်ကစားနေသည်။ ကိုလတ် မနေနိုင်တော့ “စုတ် . . စုတ်စမ်းပါ မဝေရာ၊ ငါ မနေနိုင်တော့ဘူး၊ အဆုံးထိ ဆွဲစုတ်ဟာ၊ နင့် အာခေါင်နဲ့ ထိအောင် ထိုးဟာ၊ မရတော့ဘူးဟ၊ ငါ ထွက်ခါ နီးနေပြီ၊ ငါ့ကို ဆွ မနေနဲ့တော့၊ သေချာ ငုံပြီး ဆွဲ စုတ်စမ်းပါ၊ အား အား ကောင်းတယ် အဲ လို အဲ လို အား မဝေ မဝေ . . အား အား နင် နင် အား အား ကောင်း ကောင်း အား ကောင်း” ကိုလတ် ပြောသည်ကို မဝေ က တထပ်တည်း ကျအောင် လိုက်လုပ်ပေးရင်း “အား အား အား အား မရတော့ဘူး ထွက်ပြီ ထွက်ပြီ မထုတ်လိုက်နဲ့၊ စုတ် စုတ် ငုံထား ငုံထား၊ အား အား အား အား” တ အား အား အော်ရင်း ကိုလတ် ငြိမ်ကျသွားသည်။ မဝေက ကိုလတ်လီးကို ခန ကြာမျှ ဆက်ငုံထားရာမှ စုတ်ဆွဲ လေး စုတ်ကာ ဆွဲထုတ်လိုက်ပြီး ပေါင်ရင်းမှာ ခေါင်းတင် မှေးလိုက်သည်။ “စောက်ကောင် နင် မထုတ်တာ ဘယ်လောက်ကြာပြီလဲ၊ ညှီလိုက်တာ၊ ပြစ်ခဲ နေတာဘဲ” “ကြာပြီဟ၊ မှတ်တောင် မမှတ်မိဘူး၊ အဲဒါမှ ကောင်းတာပေါ့ဟ၊ တကယ့် အဆီအနှစ်” “ဗျန်း . . . စောက်ကောင် ဘာ အဆီ အနှစ်လဲ ငါ့မှာ မနဲ မြိုရတယ်” ကိုလတ် ပေါင်ရင်း ခေါင်းတင် အိပ်နေရာက ဘိုက်ကို ဗျန်း ကနဲ အသံထွက်အောင် ရိုက်ရင်း မဝေက ပြောသည်။
“ကောင်းလိုက်တာ မဝေရာ၊ ငါလဲ ခုမှ နေရ ထိုင်ရတာ အဆင်ပြေသွားတယ်၊ ဒါကြောင့် နင့်ကို ငါ စွဲနေတာ၊ တော်ကြာ င့ါ လီး ပြန်တောင်လာရင် အပီ တက်လိုးဟာ” “နင့် လီးက တောင်မှ တောင်ပါ့တော့မလားဟ၊ ခု တချီထဲ သာခွေယိုင် ဖြစ်နေပြီ၊ နင် လဲ အသက်ကြီးလာပြီနော် အရင်လို မဟုတ်တော့ဘူး၊ စိတ်သွားတိုင်းကိုယ်မပါတော့ဘူး၊ လုပ်မနေနဲ့” “နင်ကလဲဟာ ငါ့ကို အထင်သေးလို့၊ နင် အလိုးခံချင်သေးတယ် မို့လား ငါသိတယ်” “ရပါတယ်ဟ၊ အလိုးခံ ချင်ပေမဲ့ နင့်ဟာကမှ မနိုင်တော့တာ” “နိုင်တယ်ဟာ ထည့်သာထည့်” “ဘယ်လိုထည့်မလဲ ဒီမှာ နင့်လီးက ပျော့နေတာ” “ဒီလောက် မပျော့ပါဘူးဟ၊ ငါသိတယ်၊ တင်းနေသေးတယ်၊ ရအောင်ထည့်ဟာ၊ နင့် ထဲ ရောက်သွားရင် အလိုလို တောင်သွားမယ်၊ မပူနဲ့” “အင်း” ပြောပြောဆိုဆို မဝေက တက်ခွကာ ကိုလတ်လီးကို ကိုင်ပြီး သူ့ စောက်ပတ် နှင့် တေ့ကာ ဖိချလိုက်သည်။ ခပ်ပျော့ပျော့ လီးက ကွေးညွှတ်သွားပေမဲ့ ချော်ထွက်မသွား၊ တအိအိ တိုးဝင်သွားသည်။ “အားးးး” နှစ်ယောက်လုံး ခပ်တိုးတိုး အသံထွက်လာပြီး စောစောက အေးသလိုလို ဖြစ်နေသော တနှာစိတ်က စောက်ဖုတ် နဲ့ လီး အတွေ့အထိကြောင့် ပြန်ထလာသည်။ စောစောက ခပ်ပျော့ပျော့ နှင့် တိုးဝင်သွားသော လီးက တဖြေးဖြေးနှင့် သိသိသာသာ တင်းမာလာသည်။ “အားးး ကိုလတ် တောင်လာပြီ၊ ငါ့ထဲမှာ ပြည့်နေတာဘဲဟာ၊ နင် ဟာလေ၊ အရင်ကလိုဘဲ” “ငါ မပြောဘူးလား၊ နင့် နဲ့ဆို ငါက အမြဲထန်နေတာ သိပြီလား၊ လုပ်တော့ဟာ နင့် စိတ်ကြိုက်” မဝေက ကိုလတ် ဘိုက်ပေါ် လက်ထောက်ကာ သူ့ ခါးကို ဖြေးညှင်းစွာ စ ကစားသည်။ စကားသံတွေ မထွက်တော့၊ စကားသံ အစား ငြီးညူသံ မောဟိုက်သံ တွေသာ ရပ်လိုက် ပျောက်လိုက် ထွက်ပေါ်လာသည်။
ငါး။ ပြုံးပြီး ပြန်လာသော မဝေကို အိမ်ပေါ် ရောက်သည်နှင့် စစ်ဆေးရေးက စတော့သည်။ “အမယ် မဝေ တို့များ ပြုံး နေတာဘဲ၊ မျက်နှာကိုက မှို ရလာတဲ့ မျက်နှာ ခစ် ခစ် ခစ် ခစ်” မခိုင် ရဲ့ အပြောကို မဝေက ပြုံးရင်း “ဟဲ့ မှို သွားရှာတာ၊ မှို မရလို့ ဘာရ ရ မလဲဟ” အမူအရာ ပါပါ နှင့် ပြန်ပြောသော မဝေ စကားကြောင့် မခိုင်က “ဒါဆို ဘယ်မှာလဲ အဲ့ဒီရလာတဲ့ မှို၊ ပေး၊ အကုန် ကြော်စားပြစ်မယ်” “ခစ် ခစ် ခစ် မှိုက တချောင်းထဲ ရတာ၊ ငါ စားလို့ ကုန်ပြီ ခစ် ခစ် ခစ် ခစ်” မဝေက သူ့စကားကို သူ သဘောကျ သလို တခစ်ခစ် နှင့် အူလှိုက်သဲလှိုက် ရယ်သည်။ မဝေ ပုံစံကို ကြည့်ရင်း အကင်းပါးသော မဇင်က “ဟော ဟော ပေါ်ပြီ ပေါ်ပြီ၊ ပြော ပြော၊ မဝေ အကုန် ပြောပြဟာ” “ဘာ ပြောရမလဲဟ” ပြုံးစိစိ ဖြင့် ပြန်ပြောသော မဝေ စကားကို မဇင်က “နင်စားလာတဲ့ မှို အကြောင်းလေ၊ ခစ် ခစ် ခစ် ခစ် မဝေကလဲ အချင်းချင်း လာလျို နေတယ်” “အပျိုကြီးနော် အဲဒါမျိုးဆို အင်မတန် ၀ါသနာပါ၊ ဘာမှ မလျိုပါဘူးဟ၊ ငါတို့က ဘာမှ မဟုတ်ပါဘူး၊ သူငယ်ချင်းပါ၊ ပြောရင် နင်တို့ နားလည်မှာ မဟုတ်ပါဘူး” “ဒါဆို ပြောကြည့်လေ၊ ငါတို့ နားလည်လား မလည်လား သိရအောင် ခစ် ခစ် ခစ် ခစ်” “နင် တို့ကလဲ ဇွတ်ဘဲ၊ နင်တို့ သိလဲ ဘာထူးမှာလဲဟ” “အင်းလေ ဟုတ်သားဘဲ မခိုင်ကလဲ၊ သူက မပြောချင်တဲ့ဟာကို ဘာမှ မပူနဲ့ အချိန်တန် သူ့ဖာသာသူ မနေနိုင် မထိုင်နိုင် လာပြောလိမ့်မယ်၊ အဲ့အခါကျမှသိမယ်” “ခစ် ခစ် ခစ် ခစ် နင်တို့ကလဲ၊ ဒါနဲ့ နင်တို့ ညစာ စားပြီးပလား၊ အိမ်မှာ ဘာချက်လဲ” “စားပြီးပြီလေ၊ နင့်က ဘယ်အချိန်ပြန်လာမှန်းမှ မသိတာ၊ ဘယ်စောင့်မလဲ၊ နင် မစားရသေးဘူးလား၊ နင့် ကိုလတ်ကလဲဟာ တနေ့လုံး ခေါ်သွားပြီး ဘာမှတောင် မကျွေးလိုက်ဘူးလား”
“စောက်ကောင်မတွေ စောက်ရမ်း ပြောမနေနဲ့၊ ငါက ကိုလတ် နဲ့ အပြင်မှာ စားခဲ့ပြီးပြီ၊ ဒါကြောင့် ဒီလောက် နောက်ကျတာပေါ့ဟ၊ ပထမ နင်တို့ကိုတောင် လာခေါ် အုံးမလို့ဘဲ၊ ဒါပေမဲ့ ငါတို့က အရမ်း ဆာနေကြပြီ ဆိုတော့ နင်တို့ကို လာခေါ်ရင် ကြာအုံးမှာ၊ ဒါကြောင့် မခေါ်တော့ဘဲ ငါတို့ဖာသာဘဲ သွားစားလိုက်တာ” “ခစ် ခစ် ခစ် ခစ်” “ဘာရီတာလဲ” “ဘာမှ မဟုတ်ပါဘူး၊ နင်တို့ အရမ်းဆာ နေကြတယ် ဆိုတာကို သဘောကျလို့” “တကယ်ဟ၊ တကယ်ဆာတာ၊ ဆာတာမှ အသားတောင် တုန်တယ်” “၂ ယောက်လုံးလား” “အင်း ၂ ယောက်လုံး” “ဆာတာမှ အသားတွေ တောင် တုန်တယ်လား” “အင်း” “ဟယ် ထူးဆန်းတယ်နော် မဇင်” “အင်း ထူးဆန်းတယ် ခိ ခိ ခိ ခိ” “ခစ် ခစ် ခစ် ခစ် ဘာထူးဆန်းလဲ ဘိုက်ဆာတာဘဲဟာ” “အော် မထူးဆန်းဘူးတဲ့ မဇင်ရ” “ခိ ခိ ခိ ခိ အင်း အင်း ဟုတ်သားဘဲ မထူးဆန်းဘူးနော် မခိုင်” “စောက်ကောင်မတွေ ငါ့ကို ရိမနေနဲ့၊ တော်တော်သိချင်နေကြတယ် မို့လား၊ ကဲ ပြောပြမယ်။ လက်ဖက်သုတ်ဟာ လက်ဖက်လေး စားပြီး နင်တို့ ကို ငါ နဲ့ ကိုလတ် စသိတဲ့ အချိန်က စပြီး ပြောပြမယ်၊ ကြေနပ်ပြီလား” “ခိ ခိ ခိ ခိ၊ ကဲ ကဲ မခိုင် လက်ဖက်သုတ်၊ လက်ဖက်သုတ်၊ ကောင်းကောင်းလေးသုတ်နော်၊ လက်ဖက် အသားများများထည့်၊ ဒီည မအိပ်ဘဲ မဝေ ဇတ်လမ်း ကို နားထောင်ရမယ်” ခြောက်။ အင်း အစက ပြောရရင်၊ ကိုလတ်နဲ့ စတွေ့တော့ ငါတို့ အားလုံး ပထမနှစ်ဘဲ ရှိသေးတယ်၊ အဲ့တုန်းက သူက ငါ့ သူငယ်ချင်း ကို ကြိုက်တာဟ၊ အဲဒီမှာ ထုံးစံအတိုင်း သူတို့ အုပ်စု နဲ့ ငါတို့ မိတ်ဆွေ ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့။
သူတို့ ၂ ယောက်က လိုက်လဲ လိုက်တယ်၊ သူတို့ အဖွဲ့ ထဲဆို သူက အချောဆုံး၊ ငါ တို့ အဖွဲ့ထဲ ဆိုလဲ ငါ့သူငယ်ချင်းက အချောဆုံးပါ့၊ ချောတာမှ ငါ့သူငယ်ချင်းက တော်တော် ချောတာ၊ ဆံပင်ကလဲ အရှည်ကြီး ကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက်ကလဲ လှ၊ အိနြေလဲရှိ၊ ဒီတော့ သူက ကြိုက်တာပေါ့၊ ငါတို့ကလဲ သူတို့ ၂ ယောက်ကို ဘေးက ၀ိုင်းတီးပေးကြတာပေ့ါ၊ အဲဒီမှာ နင်တို့ သိတဲ့ အတိုင်းက ငါက စကားများတယ်၊ ဟိုစပ်စပ် ဒီစပ်စပ် ဆိုတော့ သူက ငါ့ သူငယ်ချင်းကို သာကြိုက်တာ၊ လေပေးဖြောင့်သွားတာက ငါနဲ့ဟ၊ ပြောရရင် ဇတ်လမ်းက အဲ့ကနေစတာ။
နင်တို့ သိတဲ့ အတိုင်း ငါကလဲ ခင်ပြီဆို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း၊ ဟန်ဆောင်ပန်ဆောင် တွေ မပြောတတ်ဘူး၊ ဒီတော့ သာမန် မိန်းခလေး ပုံစံ မပေါက်တဲ့ ငါ့ကို သူခင်တာပေါ့။ ငါကလဲ စကားပြောရင် ပါးစပ်က ထွက်ရာ ပေါက်ကရ ပြောတတ်တာ၊ အဲဒီကနေ စတယ် ဆိုမလား၊ တယောက်နဲ့ တယောက်က စကားအပြောဆို ပွင့်လင်းလာတာ။ နောက်ပြီးတော့ ဖြစ်ချင်တော့ သူတို့ အဖွဲ့ထဲက သူ့ သူငယ်ချင်းက ငါ့ကို ကြိုက်နေတာ၊ အဲ့ကောင်က အုံပုန်း။ သူကလဲ ငါ့ကို အဲ့ကောင်နဲ့ လာလာလှော်တယ် ဆိုပါစို့။ ခင်သာခင်တယ် ပြောပေမဲ့၊ တခါ တခါ သူက စိတ်လိုရင် ငါ့ကို ချောတယ် ဘာညာ၊ ရိသဲ့သဲ့က လုပ်သေးတာ၊ နင့် မျက်နှာက ဆွဲဆောင်မှု့ ရှိတယ်၊ ကိုယ်လုံးကလဲ လှတယ်၊ ဘာညာပေ့ါဟာ၊ ငါကလဲ အဲ့လို သူလာပြောရင် ရှက်ကိုး ရှက်ကန်း ဖြစ်မနေဘူးဟ၊ သူ့ နဲ့ ဆို ငါ့ စိတ်ထဲက ရင်းနှီးနေသလို ခံစားနေရတာ၊ ငါကလဲ ပြန်ပြောတာပေါ့၊ ငါ့ ပုံစံ နင်ကြိုက်လား ဘာညာပေါ့၊ သူကလဲ ကြိုက်တယ်ပေါ့၊ ဒီလို ပြောရင်း နဲနဲ လွန်လာရင်တော့ သွားစမ်းပါဟာ၊ စောက်ပိုတွေ၊ ဘာညာနဲ့ စကားကို လျှော ချ လိုက်ပေါ့။ အဲဒီ အချိန်မှာ သူ နဲ့ ငါ့ သူငယ်ချင်းက ဖြစ်နေပြီဟ၊ ငါ့သူငယ်ချင်းက သူ့ကို အဖြေပြန်ပေးပြီးပြီ။ ရီစားသက်တမ်းကလဲ နဲနဲ ကြာလာပြီဆိုတော့ ငါကလဲ မေးတာပေါ့၊ နင့် တို့ နှစ်ယောက်ချင်း မတွေ့ကြဘူးလား၊ ဘာညာပေါ့၊ သူကလဲ တွေ့ချင်တယ် ပြောတယ်၊ ဒါဆိုလဲ ချိန်းဟာ ဆိုပြီး ငါကလဲ မြှောက်ပေးတယ်။ ဒါပေမဲ့ တွေ့ရမှာ ကြောက်နေတယ်တဲ့၊ ဘာကြောက်တာလဲဆိုတော့ သူ့ က ငါ့ သူငယ်ချင်းကို မကြိုက်တော့မှာ စိုးတာတဲ့၊ ငါက ပထမတော့ နားမလည်ဘူးဟ၊ ဒီတော့ သူ ငါ့ကို ရှင်းပြတယ်၊ သူ့ မှာ အရင်က ရီးစား ၂ ယောက် ရှိခဲ့ဘူးတယ်၊ အဲဒီ ရီးစားတွေ နဲ့ အဲလို လူကွယ်ရာ ချိန်းတွေ့ပြီး ပြတ်သွားဖူးတဲ့ အကြောင်း။
သူလဲ သူ့ကိုယ်သူ ဘာဖြစ်မှန်း မသိဘူးတဲ့၊ ခုလို ရိုးရိုးသားသား ချစ်နေတဲ့ အချိန် ဘာမှ မဖြစ်ပေမဲ့ အဲလို နှစ်ယောက်ထဲ လွတ်လွတ်လပ်လပ် တွေ့ပြီးရင် သူက စိတ်မပါတော့ဘူးတဲ့၊ တကယ်တော့ မိန်းခလေးတွေက အပြင်က ဘယ်လောက်ဘဲ လှလှ၊ တကယ်တန်း အ၀တ်အစား ချွတ်လိုက်ရင် သူ့စိတ်ထဲက မလှတော့ဘူးတဲ့ဟ၊ ဒါကြောင့် အဲ့လို ချိန်းပြီးရင် သူမကြိုက်တော့တာတဲ့၊ အဲဒီကနေ စပြီး ငါ သူ့ အကြောင်းကို စသိတော့တာဘဲ။ ဒီကောင်က လူတမျိုးဘဲ၊ ကိုယ်ရတဲ့ မိန်းခလေးကိုကျ မလှဘူး ထင်ပြီး မရတာကိုဘဲ လိုချင်နေတဲ့ ကောင်။ ငါတော့ ဒီလိုဘဲ မြင်တယ်။ စိတ်ရောဂါ တမျိုးလို့ ပြောရင် ရမလားဘဲ။ အဲဒီကနေ စပြီး ငါ နဲ့ သူ လဲ နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်တွေ အကုန်ပြောဖြစ်တော့တာဘဲ၊ တဖြေးဖြေး နဲ့ ငါလဲ သူ့ အကြောင်း သိလာတာပါဘဲ၊ ခစ် ခစ်၊ သူကလဲ ငါ့ကို အဲလိုသူ့ အကြောင်းတွေ အသေးစိတ် ပြောပြရတာ သဘောကျတယ်တဲ့ဟ၊ သူ့ သူငယ်ချင်းတွေတောင် သူ ဒီလို အသေးစိတ် မပြောဘူးတဲ့၊ ငါက ပထမ ဆုံး သူ့ စိတ်ထဲ ရှိတာ ပြောပြဖူးတာတဲ့။ သူ့ ကောင်မတွေ ကို ချွတ်လိုက်လို့ သူ မြင်ရင်သာ သဘောမကျတာ၊ နိုင်ငံခြား မဂဇင်းတွေ ဘာတွေ မှာ ပါတဲ့ နိကက် ကောင်မပုံတွေကျတော့ သူက ကြိုက်တယ်ဟ၊
စိတ်ပါတယ်တဲ့၊ ဘာကွာလဲ မေးတော့လဲ သူက ရေရေရာရာ မပြောတတ်ပြန်ဘူး၊ အရိုးများတယ် ချေးခါးတယ် ကြံဖန် အပြစ် မြင်တတ်တဲ့ ကောင်၊ တကယ်တန်း ဆိုလဲ သူ့ရီးစားတွေ မလှတာလဲ မဟုတ်ပါဘူး။ နို့သီးခေါင်းလေး သေးတာ၊ ကြီးတာ၊ နို့အုံ တွဲတာ တင်းတာ က အစ၊ အမွေးတွေ ပေါက်တာ၊ မှဲ့ ရှိတာ၊ အမာရွတ်ရှိတာ၊ ဟိုနေရာဆို အသားအရောင်ကွာတာ၊ မဲတယ်လေး ညိုတယ်လေး၊ အဓိက ကျတဲ့ နေရာတွေရော၊ အဓိက မကျတဲ့ နေရာတွေရော တကိုယ်လုံး ကြည့်ပြီး၊ သူ့ဖာသာ သူ ဖြစ်နေတာ၊ တကယ်တော့ ဒါတွေက ဘာမှလဲ မဆိုင်ဘူး၊ တကယ်ချစ်ရင် ဒါတွေက အပြစ်လို့ကို မြင်စရာကို မလိုတာ၊ မဟုတ်ဘူးလား။ အဲဒီမှာ ငါက သူ့ကို အားပေးတာပေါ့၊ ချိန်းသာ ချိန်းဟာ၊ စမ်းကြည့်။ နင်ကြိုက်သွားရင် ပီးတာဘဲ၊ တကယ်တန်း ယူပြီးမှ မကြိုက်တော့ရင် ပြသနာ ပေါ့ ဘာညာပေါ့၊ ငါက သူ့ ဘက်ကနေ အကြံပေးဖြစ်တာ၊ ငါ့ သူငယ်ချင်း ဘက်ကတောင် ငါ သိပ်မစဉ်းစားခဲ့ဘူး၊ သူ့ကို ဘယ်လောက်ထိ သံယောဇဉ် ကြီးလဲ အဲဒါသာ ကြည့်၊ တကယ်တော့ ငါလုပ်သင့်တာက အဲဒါ ဆိုလဲ ငါ့ သူငယ်ချင်းကို ဒုက္ခ မပေးပါနဲ့ဟာ၊ ဘာညာ နဲ့ ဖြစ်ရမှာ၊ အဲလို မဖြစ်ဘဲ သူ့ ဘက်က နေ သူ ကြိုက်ဘို့ အရေးကြီးတယ် ဘဲ ထည့်တွက် တော့တာ၊ အဲ့ဒီတုန်းက သူ့ သူငယ်ချင်း နဲ့ ငါ နဲ့က မဖြစ်သေးဘူး၊ ဟိုကလဲ ငါ့ကို ခုထိ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ကို မပြောဘူး။ ခု ထိ ငါ့ကို မြင်ရင် ကြောက်ဒူးတုန် နေတုန်း၊ အမှန်ပြောရရင် ငါက လဲ အဲ့ကောင်ကို စိတ် မ၀င်စားပါဘူး။
ယောက်ကျား ဖြစ်ပြီး ဒီလောက် မပြောရဲ မဆိုရဲ ဖြစ်နေမှတော့ ဘယ်နေရာ သွားသုံးမလဲ၊ ငါက ယောက်ကျားဆို ကိုလတ်လို ရဲရဲတင်းတင်း ကိုယ်လုပ်ချင်တာ လုပ်တတ် တဲ့ လူမျိုးမှ ကြိုက်တာ။ တခါတလေ ငါ့ ကိုမျက်နှာကို စေ့စေ့ကြည့်ပြီး နင်က တော်တော် လှတာဘဲ၊ တောက် . . ငါ ဖက်နမ်းချင်စိတ်ကို မနဲ ထိမ်းထားရတယ် ဆိုပြီး အားမလို အားမရ ပြောရင် ငါ့ ရင်ထဲ ကြည်နူးပြီး အရမ်း ကြေနပ်တာ။ ဟန်ဆောင်ပန်ဆောင် သူ့ကို တဘုန်းဘုန်း ထုရိုက်ပြီး စောက်ကောင် အချင်းချင်း ပြောစရာလား ဘာလား ဆဲပေမဲ့ ငါ ဖာသာ ငါ ကြေနပ် နေတာ ငါအသိဆုံး၊ ငါ ဘယ်လောက် ဆဲဆဲ ထုထု သူကလဲ မလျှော့ဘူးဟ၊ တကယ်ဟ ဘာညာ ဆက်ပြောသေးတာ။ အဲဒါတွေက သူ နဲ့ ငါ နဲ့ ကြား မပြောဘဲ ညိနေတဲ့ သံယောဇဉ် ပေါ့ဟာ။ အဲဒီမှာ တနေ့ သူ ငါ့ကို ချိန်းတာ၊ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ သူ့ကောင်မလေးအတွက် မွေးနေ့ လက်ဆောင် သွားဝယ်မလို့၊ အဲဒါ ဘယ်သူမှ မသိအောင် သွားဝယ်ချင်တယ်ပေါ့၊ သူဝယ်ချင်တာကလဲ မိန်းမ အသုံးအဆောင်ပစ္စည်း၊ အဲဒါ ငါ့ကို လိုက်ရွေးပေးပေါ့၊ ဘယ်သူမှ မသိအောင် သွားမယ် ဆိုပြီး ငါ့ကို တိတ်တိတ်လေးချိန်းတာ။ ငါကလဲ အင်း ပေါ့၊ အဲဒါ ကျောင်းပိတ်တဲ့ စနေ နေ့ ငါလဲ အဆောင်က အစောကြီး ထွက်ပြီး သူ့ နဲ့ သွားတွေ့ရော။ ခွန်။ ငါလဲ ဘာစိတ်ကူးပေါက်လဲ မသိဘူး၊ အဲ့နေ့က သေချာ အလှပြင်ဖြစ်တယ်၊ ၀တ်ထားတာကလဲ အကြပ်လေး၊ ငါ့ ပစ္စည်းကိုအရှိအတိုင်း ပြသလို ဖြစ်နေတာ၊ ခိ ခိ၊ အမယ် နင်တို့ ဘာသိလဲ၊ အဲ့တုန်းက ခုလောက်မထွားပေမဲ့ ပစ္စည်း ရှိ လူတမ်းစားထဲ ငါပါ ပါတယ်၊ ငါလဲ အလှပြင်ရင်း ရင်တွေ ဘာတွေတောင် ခုန်လို့၊ ရီးစားနဲ့ ချိန်းတွေ့ သလိုမျိုး င့ါစိတ်ထဲ ဖြစ်နေတာ၊ ငါကောင်းကောင်းမှတ်မိတယ်၊
အဲ့နေ့ တရက်ထဲ အဲလို ဖြစ်တာ၊ နောက်ပိုင်း သူ နဲ့ တွေ့တိုင်း ဒီလောက် မပြင်ဖြစ်တော့ဘူးဟ၊ အဲ့ဒီနေ့က တွေ့တော့ သူလဲ ရှိုးနဲ့ မိုးနဲ့ ဟ၊ သူ့ပုံကို ငါ အခုထိ မှတ်မိနေတာ၊ ဂျင်းဘောင်းဘီ အပြာ၊ စုတ်စုတ်ပြတ်ပြတ် ဂျင်းပန် မဟုတ်ဘူးနော်၊ စတိုင်ကျကျ၊ သူ့ကိုယ်နဲ့ တိုင်းချုပ်ုထားသလိုဘဲ၊ ခါတိုင်းဝတ်နေကျ ပုံစံ မဟုတ်ဘူး၊ အင်္ကျီ အဖြူ နဲ့ အပြာ မတ်တတ်စင်းလေး၊ ဆံပင်ကလဲ ရေစိုပုံစံ ကပိုကရိုလေး၊ ရှုးဖိနပ် နဲ့ သေချာ ကျကျ နန။ တွေ့တော့ နှစ်ယောက်သား တယောက်ကို တယောက် ကြည့်ပြီး ရီမိတယ်၊ သိတယ်လေဟာ နှစ်ယောက်လုံး ရှိုးထုတ်လာတယ် ဆိုတာ၊ ဒါပေမဲ့ မပြောဖြစ်ကြဘူး၊ အရှက်ပြေဘဲ ရယ်ဖြစ်ကြတာ။ ပြီးတော့ နှစ်ယောက်သား စတိုးဆိုင်ထဲ ရောက်သွားတယ်။ သူက ရေမွှေး အကောင်းစား ၀ယ်ပေးမယ်ဆိုတော့ ဆိုင်ထဲ ဟိုဟိုဒီဒီ ရွေးရင်း ဆိုင်ထဲက အရောင်းစာရေးမလေးက ငါတို့ ကို အတွဲထင်နေတာ၊ အဲဒါကို ငါက အတွဲမဟုတ်ဘူး ပြောမလို့ သူက လက်ကုတ်ပြီး မပြောဘို့ မျက်ရိပ်ပြတာနဲ့ ငါလဲ အသာနေလိုက်တယ်၊ အဲဒီတော့မှ သူက ငါ့ကို စာရေးမ ရှေ့မျာ သူ့ ချစ်သူလို ဂရုစိုက်ပြတာ၊ ငါ့စိတ်ထဲ ကြေနပ်သလိုလို၊ ဘာလိုလို တမျိုးဘဲ၊ နေရင်းထိုင်ရင်း ပျော်နေတာ၊ အဲဒီကနေ အရှိန်ရသွားတယ်နဲ့ တူတယ်၊ စတိုးဆိုင်က အထွက် မနက်စာ သွားစားတော့လဲ ငါ့ကို သူ့ ရီးစားလို ဂရုစိုက်ပြနေသေးတယ်။ ငါတို့ နှစ်ယောက် အဲ့တုန်းက ရီးစားဖြစ်နေတဲ့ အတိုင်း၊ အဲဒီကနေ ပြန်မယ် ဆိုပြီး သူ့ ကားနဲ့ ပြန်လာတာ။ အဲဒါ လမ်းမှာ ဘာစိတ်ကူးပေါက်လဲ မသိဘူး။ “ငါ့အိမ်သွားမယ်ဟာ နင်လိုက်ခဲ့။
နင်လဲ ရောက်ဖူးတာပေါ့” “ဘာလုပ်မလို့လဲ၊ မသွားချင်ပါဘူးဟ၊ တော်ကြာ နင့်အိမ်က လူတွေ တမျိုး ထင်အုံးမယ်” “မထင်ပါဘူးဟ၊ ငါ့ အိမ်မှာ ဘယ်သူမှ မရှိဘူး” “အာ စောက်ကောင် ဒါဆို ပိုဆိုးတာပေါ့၊ အဲဒါမှ ငါ့ ဘ၀ ပျက်မှာ၊ နင်က ငါ့ကို မကောင်းကြံနေတာ မို့လား” “နင် ဘယ်လို သိလဲ” “သိတာပေါ့ဟ၊ နင့် ပုံစံ အသိသာကြီး၊ ဒီနေ့ တနေ့လုံး ငါ့ကို နင့် ရီးစား လိုလို လုပ်နေတာ၊ ဟွန်း မပြောချင်လို့” “နင်ကလဲဟာ၊ မကောင်းတော့ မကြံပါဘူးဟ၊ ငါ နင့် နဲ့ အဲ့ဒီလို နေ နေရတာ ကိုပျော်နေတာ၊ နင်ကရော အဲလို နေရတာ မပျော်ဘူးလား” “တော်စမ်းပါဟာ၊ ငါက နင့်ကို သူငယ်ချင်းလို ခင်တာနဲ့ နင့်စိတ်ထင် ငါ့ကို နင်လုပ်ချင်လုပ်လို့ ရမယ့် အပေါစားကောင်မများ မှတ်နေလား” “ဟ ဘာဆိုင်လို့လဲ၊ နင့်စိတ်ထင် ငါကရော မိန်းမတိုင်း အဲလို ဖေါရောသောရော နေတဲ့ ကောင်များ မှတ်နေလို့လား” “ဒါဆို ငါ့ကို ဘာလို့ လာနေလဲ” “ဘာလို့ လာနေလဲ ဟုတ်လား၊ နင် တော်တော် သိချင်လား” “စောက်ကောင် တော်ပြီ မပြောနဲ့၊ ငါ မသိချင်ဘူး” “ပြီးရော၊ ဟော ရောက်ပြီ၊ ရှေ့က အိမ်က ငါ့ အိမ်” “နင် နော် နင်၊ အိမ်ထဲရောက်ပြီး ငါ့ကို မဟုတ်တာ လုပ်လို့ကတော့ သေပြီသာမှတ်” “ စိတ်ချ၊ မလုပ်ဘူး၊ မလုပ်ဘူး၊ နင်လဲ ငါ့ကို ဘာမှ မလုပ်နဲ့” “စောက်ကောင်၊ ငါကတော့ လုပ်ချင် လုပ်မှာပေါ့၊ ခစ် ခစ် ခစ် ခစ်၊ ငါ့ သဘော၊ နင်သာ ငါ့ကို ဘာမှ မလုပ်နဲ့” “ဟီး ဟီး ဟီး ဟီး၊ ငါ နင့်ကို သဘောကျ တာ အဲ့ဒီ အပြောတွေကြောင့်” “ဘာဆိုင်လဲ” “နင်ကလဲ ငါ မကောင်းတဲ့ စိတ်နဲ့ နင့်ကို ခေါ်လာတာ မဟုတ်ပါဘူးဟ၊ ခု အစောကြီး ရှိသေးတယ်၊ နင့်ကိုလဲ မပေးပြန်ချင်သေးဘူး၊
ငါ့စိတ်ထဲ နင့်နဲ့ အတူတူနေပြီး စကားတွေ ဘာတွေ ပြောချင်သေးတယ်၊ ဒါကြောင့်ပါ၊ အပြင်မှာ လျှောက်သွားနေရင် သူများမြင် နင့်အတွက် ဘယ်ကောင်းမလဲဟ၊ ခု ငါ့ အိမ်မှာ ဆိုတော့ လွတ်လွတ်လပ်လပ်၊ နေချင်သလိုနေ၊ ဘယ်သူမှလဲ မသိ၊ မဟုတ်ဘူးလား” “အေးပါ အေးပါ၊ ရောက်ရင်လဲ တခါး မြန်မြန်သွားဖွင့်၊ ကားပေါ်ထိုင်ပြီး တရားဟောမနေနဲ့၊ ငါ အခုရေလဲ သောက်ချင်တယ်၊ သေးလဲ ပေါက်ချင်တယ်၊ ဒီ ဒေါက်ဖိနပ် ကြီးနဲ့ ရှိုးထုတ်ထားရတာ ခြေထောက်လဲ နာနေပြီ” “ဟီး ဟီး ဟီး ဟီး” ရှစ်။ အိမ်ထဲရောက်တော့ ငါလဲ ငါ့ကိစ္စ အရင်ရှင်းရတာပေါ့၊ နင်တို့ကို မရှက်တမ်း ပြောရရင် အဲ့ဒီနေ့က ငါ ဘာလုပ်မိလဲ သိလား၊ ရှုးပေါက်ပြီး ရေသေချာဆေး၊ အနံ့အသက် ကောင်းမကောင်း ငါ့ဖာသာဆန်းစစ်၊ အတွင်းခံ ဘောင်းဘီလဲ မနံနေအောင် ချွတ်ပြီး ခါလိုက်သေးတယ်၊ ခိ ခိ၊ အဲဒီတုန်းက ငါတွက်ထားတာက သူ မနေနိုင်လို့ င့ါကို မဟားဒရား လာလုပ်ရင် စိတ်မပျက်သွားအောင်ပေါ့။ အဲ့လောက်ထိဟာ၊ လူကသာ ဘာညာ ပြောနေတာ၊ စိတ်ထဲက သူလုပ်တာ ခံချင်နေတာ၊ ငါကိုက ရွတာ၊ ခိ ခိ၊ ဒါနဲ့ဘဲ အိမ်သာထဲ နဲနဲကြာသွားတယ်၊ ငါထွက်လာတော့ သူက မီးဖိုခန်းမှာ သံပုရာရည် ဖျော် နေတာ ငါသောက်ဖို့တဲ့၊ ငါက ကျောင်းမှာဆို သံပုရာ ရည်ဘဲ သောက်တတ်တယ်လေ၊ သူက စတိုင်ကျကျ ၀တ်ထားတဲ့ သူ့ အကျီကို အပြင်ထုတ် ပြီး ရင်ဘတ်ကို ဖွင့်ထားတာ၊ သူ့ပုံကလဲဟာ ယောက်ကျား ပီပီသသ၊ ကာယဗလ မောင်လို အထွားကြီး မဟုတ်ပေမဲ့ သူ့ ဟာနဲ့ သူ တော်တော် ကြည့်လို့ကောင်းတယ်ဟ၊ အသားအရည်ကလဲ မြင်ရသလောက် ဖြူပြီး နုနေတာ၊ ငါ့ မျက်စိကို လွှဲလို့ကို မရဘူး၊ သူပြောတော့ အကျီ လဲမလို့ လုပ်ပြီးမှ မလဲ ဖြစ်တော့ဘဲ သတိရတာ နဲ့ သံပုရာ ရည် လာဖျော်တာ တဲ့။
ငါ့ကို မြူဆွယ်တာလဲ ဖြစ်ချင်ဖြစ်မှာပေါ့ဟာ၊ အဲဒါ ငါကို မြင်တော့ သူက “သံပုရာ ရည်လေ မဝေ အကြိုက်၊ ကျောင်းမှာ မဝေ သောက်နေကျ” “တော်တယ် မောင်လတ်၊ မောင်မင်းတော်တယ်၊ ဒါပေမဲ့ ခု လောလောဆယ် ရေ ငတ်နေတယ်ဟ၊ ရေ အရင်သောက်မယ် ဘယ်မှာလဲ” “ရေခဲ သေတာ ထဲမှာ မဝေ” ငါလဲ ရေခဲသေတာ ထဲက အေးစက်နေတဲ့ ရေတဗူး ယူမော့ရင်း သူ့ကို ကြည့်ပြီး “နင်ကလဲ နဲနဲပါးပါး အနေအထိုင် ဆင်ခြင်ပါအုံးဟ၊ အကျီ ဟပြဲနဲ့၊ ငါ့ကို ဘာမှ လာမြူ မဆွယ်နေနဲ့၊ ငါ စိတ်မ၀င်စားဘူး” “နင့် အရှေ့များ ဆင်ခြင်စရာ လိုလို့လား၊ အကျီ လဲ မလို့ လုပ်နေတုန်း နင့် ကြိုက်တတ်တဲ့ သံပုရည် သတိရလို့ လာဖျော်တာ၊ လာ ဒီမှာ လာမြည်းကြည့်၊ ငါဖျော်ထားတာ ကောင်းလား” ငါသူ့ အနားကပ်သွားတော့ သူက ဇွန်းနဲ့ ခပ်ပြီး ငါ့ကို တိုက်တယ်၊ ငါလဲ အလိုက်သင့် ပါးစပ်ဟ မြည်းပြီး “သကြားနဲနဲ ထပ်ထည့်ဟာ၊ နင့်ဟာက ရေခဲ ရောလိုက်ရင် အချိုပေါ့ သွားမှာ၊ အချဉ်ကတော့ အတော်ဘဲ” ငါပြောလိုက်မှ သူက ငါမြီးထားတဲ့ ဇွန်းထဲက လက်ကျံ ကို သူထပ်မြည်းလိုက်သေးတယ်၊ အသစ်တောင် ထပ်မခပ်ဘူး၊ သူ့ ပုံစံက သူ နဲ့ငါ တော်တော် ရင်းရင်းနှီးနှီးလို သဘောထားထားသလို ဖြစ်နေတာ၊ သူက ထပ်မြည်းပြီး အင်း ဆိုပြီး သကြားထပ်ထည့်တယ်၊ ငါလဲ သူ့ပုံစံကို ကြည့်ပြီး စိတ်ထဲကတမျိုးဖြစ်သွားတယ်၊ ငါ့ကိုငါလဲ ဘာကြောင့်မှန်း မသိဘူး၊ ငါ့စိတ်က တမျိုး ဖြစ်နေသလောက် သူ့ပုံစံက အေးတိအေးစက် နဲ့ ဖြစ်နေတာလဲ ပါမှာပေါ့၊ ရုတ်တရက် ငါ့ လက်ထဲက အေးနေတဲ့ ရေဘူး နဲ့ သူ့ ရင်ဘတ်ကို ကပ်လိုက်တယ်၊ သူ မထီမဲ့မြင်နဲ့ လုပ်နေပုံကို ကြည့်ပြီး အသဲက ယားလာတာဟ၊ ဆွဲလုပ်လိုက်ချင်တာ၊ သူကလန့်သွားပြီး အား ကနဲ့ ထအော်ရော၊ အဲဒီမှာ ငါက ရီပြီး “ကဲ မှတ်ပြီလား အဲ့ဒါ မဆင်ခြင်အုံး” “ဟီး ဟီး ဟီး ဟီး မဝေကလဲ အထူးအဆန်းလုပ်လို့၊ နင် ယောက်ကျားလေး အကျီဟပြဲ ၀တ်ထားတာ တခါမှ မတွေ့ဘူးဖူးလား” “ဟဲ့ ငါက အဲ့ဒါတွေ လျှောက်ကြည့် နေတာမှ မဟုတ်တာ၊ ခု နင့်ကြည့်ပြီး အသဲယားလာလို့၊ ခု နင့်ကို ဒုတ်နဲ့ ကောင်းကောင်း ဆော်ပလော် တီးချင်နေတာ၊ သောက်ကောာင် ပုံစံကိုက” ငါကလဲ နင်တို့သိတဲ့ အတိုင်း စိတ်ထဲ ရှိရင် မနေနိုင်ဘူးဟ၊ ပြောချင်တာ၊ ဒါနဲ့ ပြောမိရော၊ ဒီတော့ ဒီကောင်က “တီးလေ၊ မဝေ တကယ်တီးရင် ခံမယ်၊ ဆေးရုံ ရောက်သွားပစေ၊ မဝေ တကယ်တီးရဲလား” “ဘာလို့ မတီးရဲ ရမှာလဲ တီးချင်နေတာ၊ နေအုံး တီးပြမယ်” ငါလဲ ဘာလုပ်လို့ ဘာလုပ်မိမှန်း မသိတော့ပါဘူး၊ ငါ့စိတ်ထဲက တမျိုးဖြစ်နေတာ၊ ပြောတဲ့ လေသံကိုက အရင်ကနဲ့ မတူတော့တာ ငါသိတယ်၊ စိတ်ထဲ တခုခု ကို အားမလို အားမရ ဖြစ်နေတာ၊ တခုခု လုပ်ပစ်လိုက် ချင်တာဟာ၊ အဲဒါ အိမ်ထဲ လိုက်ကြည့်လိုက်တော့ ကြက်မွေး တံပျက်စီး သွားတွေ့တယ်၊ အဲဒါနဲ့ အဲဒါကို သွားယူပြီး သူ့ကို သွားဆွဲခေါ်လာတယ်။
သူလဲ ကန့်လန့် ကန့်လန့် နဲ့ ပါလာတာ၊ အိမ်ရှေ့ရောက်တော့ ခပ်တည်တည်နဲ့ အဖျားက ကိုင်ပြီး ဟ နေတဲ့ သူ့ အကျီစကို ဟိုဘက် ဒီဘက် ပခုံးက ထိုးပြီး ဆွဲချလိုက်တယ်၊ အကျီကြ နဂိုကတည်းက ဟထားတာဆိုတော့ လျှောကျသွားတာပေါ့၊ သူကလဲ အလိုက်သင့် လက်က ဆွဲချလိုက်တယ်လေ၊ အကျီက ကြမ်းပြင်ပေါ် ပုံကျ သွားတာပေါ့၊ အဲဒီမှာ ငါက “လက် အနောက်ပြစ်ထား” ခပ်တည်တည် နဲ့ အမိန့်ပေးသလို ပြောတော့ သူက တကယ်ဘဲ လက်ကို အနောက်ပြစ်လိုက်တယ်၊ ရင်က ကော့လို့၊ သူ့ကိုယ်ပေါ်မှာ ချပ်ချပ်ရပ်ရပ် ၀တ်ထားတဲ ဂျင်းဘောင်ဘီ ဘဲကျန်တာပေါ့၊ အကျီ ကျွတ်ကျ သွားမှ သူ့ ပုံက ပိုကြည့်ကောင်းလာတယ်ဟာ၊ ဘိုက်သားဆို ကြွက်သားနဲ့ ချပ်ရပ်နေတာ၊ အဲဒါ ငါလဲ ကြက်မွေးဒုတ် နဲ့ သူ့ မာဆယ်လ် အရာတွေကို မထိတထိ လိုက်ပွတ်ပြီး သူ့ တကိုယ်လုံးကို ခပ်ဖြည်းဖြည်း ပတ်ပြီး လျှောက် ဆွဲ နေတာ၊ ငါ စိတ်ထဲ တခုခု ကြီးစိုးနေသလိုဘဲ၊ အဲဒီ အချိန်မှာ သူရော ငါရောဘာစကားမှ မပြောဖြစ်ဘူးဟ၊ ငါ့ ပုံကို ကြည့်ပြီး သူလဲ ထန်လာပုံဘဲ၊ ဘောင်းဘီအောက်က ဖေါင်းလာတာ။
ပြီးတော့ သူ့ ဘိုက်က ကြွက်သားကို ကြက်မွေးဒုတ် နဲ့ ခပ်ဆတ်ဆတ်လေး တချက် ရိုက်လိုက်တယ်၊ သူ့ကိုယ်က တွန့်ကနဲ ဖြစ်သွားပေမဲ့ ဘာသံမှ မထွက်ဘူး၊ အဲလို သူဖြစ်သွားတာ ကြည့်ပြီး ငါ့ စိတ်ထဲ ပို ဖိးလ် တက်လာသလိုဘဲ၊ ဒါနဲ့ စောစောကလိုဘဲ သူ့ မာဆယ်တွေကို ဒုတ်နဲ့ လိုက်ပွတ်ရင်း တချက်လောက် ထပ်ရိုက်လိုက်သေးတယ်၊ တအားတော့လဲ မဟုတ်ဘူးဟ၊ ခပ်ဆပ်ဆပ်လေးပါဘဲ၊ ငါလဲ ဘာဖြစ်နေမှန်းမသိဘူး၊ ငါ့စိတ်ထဲ သူ့ကိုယ်ကို ဒုတ်နဲ့ ပွတ်နေပေမဲ့ တကယ့်အတွေ့အထိကုဒုတ်ကနေ တဆင့် င့ါကိုယ်ထဲ ရောက်လာသလိုဘဲ၊ ငါ့စိတ်ထဲ တမျိုး ဖြစ်နေတာ၊ ဒုတ်နဲ့ ပွတ်နေတယ်လို့ကို မထင်ဘူး၊ လက်နဲ့ ထိနေတယ် ထင်တာ၊ အဲလို လိုက်ပွတ်လိုက် ရိုက်လိုက် နဲ့ ဘယ်နချက် ရိုက်မိသွားသလဲ မသိဘူး၊ ပြီးတော့ ဒုတ်က အလိုလို သူ့ပေါင်ကြားက ဖေါင်းကားနေတဲ့ နေရာကို ရောက်သွားတယ်၊ ပထမတော့ သူ မျက်စိကို မှိတ်ပြီး ငြိမ်ခံနေသေးတယ်၊
နောက်မှ သူလဲ မနေနိုင်တော့ဘူးထင်တယ် ငါ့ကို အတင်းဆွဲဖက်ပြီး နမ်းရော။ ပထမတော့ ငါ မရုန်းမိဘူးဟ၊ နောက်မှ ချက်ခြင်း ငါ အသိဝင်လာတာ၊ ဟာ မဖြစ်ဘူး၊ သူ့ အချစ် ခံလို့ မဖြစ်ဘူး ဆိုပြီး အဲဒီမျာ ငါ့ကို လွှတ် ဘို့ အသေအော်တာ၊ သူ့ကိုလဲ တွန်းပေါ့၊ ဒီတော့ သူလဲ လန့်ပြီး ငါ့ကို လွှတ်ရော “ဘာ ဘာဖြစ်လို့လဲ မဝေ” “နင် နင့် ငါ့ကို မထိနဲ့” “ဘာ ဘာဖြစ်လို့လဲ” “ငါ နင့်အရင်က ကောင်မတွေ လို မဖြစ်ချင်ဘူး” “ငါ ငါ မနေနိုင်ဘူး” “မနေနိုင်လဲ ရအောင်နေ၊ ငါ လုပ်တာဘဲ နင်ခံ၊ ခံမလား မခံဘူးလား ဒါဘဲ ပြော” “ခံမယ်ဟာ၊ လုပ် လုပ် နင်လုပ်ချင်တာလုပ်” “ပြီးရော၊ ဒါဆို နင်ဘာမှ မသိအောင် နင့်ကို မျက်စိ ပိတ်ပြီး လက်ကို ကြိုးချည်ထားမယ်” “ချည်ထားဟာ” အရေးထဲ မျက်စိ ပိတ်ဘို့ ရုတ်တရက် ရှာလို့ မရတာနဲ့ သူ့ စွပ်ကြယ် ဟောင်းတထည်ကို ဆွဲ ဆုတ်ပြီး မျက်စိ စည်းလိုက်ရတယ်၊ လက်ကျန် အစ နဲ့ သူ့ကို နောက်ပြန် ကြိုးတုတ်ပေါ့။ အဲဒီတော့မှ ငါဘဲ လွတ်လွတ်လပ်လပ် လှုတ်ရှားလို့ ရသွားတယ်။ လူက ထန်နေတုန်းဟ၊ သူ ဘာမှ မမြင်တော့မှ ငါက သူ့ကို လုပ်ရတာ အရသာ ပိုရှိလာတယ်၊ သူ ဆတ်ကနဲ ဆတ်ကနဲ ဖြစ်သွားတာ ကြည့်ပြီး ငါ့စိတ်ထဲ ကြေနပ်နေတာ၊ ပြီးတော့ တဖြေးဖြေး သူ့ တကိုယ်လုံး ဆွဲချွတ်ပြီး ထောင်နေတဲ့ သူ့ဟာကို ကြက်မွေးနဲ့ ကစားလိုက်၊ သူ့ကို ခပ်ဆတ်ဆတ်လေး ရိုက်လိုက်၊ သူလဲ တွန့်တွန့်လူးနေတာ၊ ငါလဲ ထန်ပြီးရွနေတာ၊ ===== ကိုး။
ငါလဲ မရတော့ဘူး၊ သူက ဘာမှ မမြင်တော့ဘူး ဆိုတော့ ငါလဲ တော်တော်ရဲလာတယ်၊ ငါလဲ ငါ့ဖာသာ တကိုယ်လုံး ချွတ်လိုက်တယ်၊ ပြီးမှ သူ့ နား ကပ်ပြီး ငါ့ နို့သီး နဲ့ သူ့ အသားကို ထိပေးလိုက်တယ်၊ ပါးစပ်ကလဲ ညစ်တီးညစ်ပတ် တွေ ဘယ်ကနေ ဘယ်လို ထွက်လာ လဲ မသိပါဘူး၊ ငါ့ လဲ ငါ့ကိုယ်ငါ အဲ့လောက် ဖြစ်လိမ့် မယ် မထင်ထားဘူးဟ၊ တခုခုက ငါ့ကို လှုတ်ဆော်နေသလိုဘဲ “ပြောစမ်းဟာ ကိုလတ်၊ နင် ငါ့ကို ဘာလုပ်ချင်လဲ ပြော ပြော” “ငါ . . ငါ . .” “ပြောစမ်းဟာ နင် ယောက်ကျား မဟုတ်ဘူးလား နင့် စိတ်ထဲ ဘာလုပ်ချင်လဲ မပြောရဲဘူးလား” ပါးစပ်ကလဲ အတင်း သူ့ကိုမေး၊ လက်ထဲက ဒုတ်နဲ့လဲ သူ့ကို ခပ်ဆတ်ဆတ်လေး ချပေါ့၊ တအားတော့ မရိုက်ပါဘူး၊ ခပ်ဆတ်ဆတ်လေးပါ၊ တကယ်တော့ ဘယ်နာမလဲ။ “ပြောစမ်းဟာ ပြောစမ်း ဘာလုပ်ချင်လဲ၊ နင့် ငါ့ကို လိုးချင်လား” “အင်း . . လိုး ချင်တယ်၊ လိုး ချင်တယ်” “ပြီးတော့ ငါ့ စောက်ဖုတ်ကို မနမ်းချင်ဘူးလော ပြောစမ်း ပြော” “အင်း နမ်း ချင်တယ် အား . . အား . . မဝေ . . နမ်းချင်တယ် ဟာ လိုးချင်တယ်” “ငါ အခု နင့်အရှေ့မှာ နိကက်နဲ့၊ နင့်ကို ငါ့ကိုယ်နဲ့ ပွတ်ပေးနေတာ နင် ကြိုက်လား ပြော၊ တွေ့လာ တွေ့လား ငါ့ နို့သီးခေါင်း နဲ့ နင့် ကိုယ်ကို ပွတ်တာ၊ တွေ့လား တွေ့လား” “အင်း အင်း နင့်အသားနဲ့ ထိတာ အရမ်းခံလို့ ကောင်းတယ်၊ နင် နင် အရမ်းလှမှာဘဲ ငါ သိနေတယ်”
“နင့်ကို မပြပါဘူး၊ နင့် စိတ်ထဲ ငါလှတာ သိပြီလား၊ ပြောစမ်း” “သိတယ် သိတယ် နင် အရမ်းလှတာ သိတယ်၊ အား အား ထိစမ်းပါ သေချာ ဖိပြီး ထိပါ” “ကဲ ကဲ စောက်ဖုတ်ကို မနမ်းခင်၊ ငါ့အတွင်းခံ ဘောင်းဘီ၊ နင် နမ်းမလား၊ “အင်း အင်း နမ်းမယ်၊ နမ်းမယ် နင့် ဟာတွေ အကုန် နမ်းချင်တယ်” “ရော့ ရော့။ ပြောစမ်း ဘာ အနံ့ရလဲ၊ င့ါ အနံ့ နင်ကြိုက်လား” “အင်း အင်း ကြိုက်တယ်၊ နင့် အနံ့က တမျိုးဘဲ၊ ရှုလို့ကောင်းတယ်၊ ကပ်စမ်းပါ ငါ့ မျက်နှာနဲ့ ထိနေအောင် ကပ်စမ်းပါ” “ပြောစမ်း အဲ့ဒါ ဘာနံ့လဲ” “နင့် စောက်ဖုတ်နံ့” “ကြိုက်လား” “ကြိုက်တယ် ကြိုက်တယ်” “ရော့ ရော့ ဒီလောက်ကြိုက်တာ ပါးစပ်ဟ၊ ငါ့ ဘောင်းဘီ ဂွကြား နင့် ပါးစပ်ထဲ ထိုးထည့်ပေးမယ်၊ နင်စုတ်ထား” “အင်း အင်း ထည့် ထည့်” “ကောင်းလား ကြိုက်လား၊ ငါ့ စောက်ဖုတ် အရသာရှိလား” “ရှိတယ်၊ ကြိုက်တယ်” “ပြောလေဟာ ပြော ပြော နင် ဘာဖြစ်ချင်လဲ” “ငါ ငါ နင့် စောက်ဖုတ်ကို ယက်ချင်တယ်” “အင်း အင်း ပေးယက်မယ်၊ နင့်ကို ပေးယက်မယ်၊ နင် တ၀ ယက်၊ ပြောစမ်း ပြီးတော့ နင့် လီးရော အစုတ် မခံချင်ဘူးလား ပြောစမ်း” “အင်း အင်း အစုတ်ခံချင်တယ်၊ စုတ်ပေးဟာ စုတ် စုတ်၊ ငါ့လီးကို စုတ်ပေး” အဲဒီလိုတွေ တကယ့် ညစ်ညစ်ပတ်ပတ်တွေဟာ၊ ဘယ်ကနေ ဘယ်လို ဖြစ်ကုန်မှန်း မသိပါဘူး၊ ငါ နင်တို့ကို ပြောရတာ တကယ်ရှက်တယ်၊ ငါလဲ ငါ့ကိုငါ အဲ့လောက် ထန်မယ် မထင်ထားဘူး၊ သူလဲ တကယ်တော့ တော်တော် ထန်တာ၊ ပြီးတော့ သူ့ကို ဆိုဖာပေါ် ဆွဲချ ပြီး တက်ခွတာ၊ ငါ့ ဟာ နဲ့ တကိုယ်လုံး လိုက်ပွတ်၊ အတင်းယက်ခိုင်း၊ ငါ ပီးသွားတော့ သူ့ကို တခါ ပြန်မှုတ်၊ ပြီးတော့ အဲ့ဒီမှာ ငါ အပျိုရည် ပျက်တာဘဲ။
ဒါ ငါ ပထမဆုံး ယောက်ကျား တယောက်နဲ့ ဆက်ဆံဘူးတာဘဲ။ အဲဒီ နေ့က အားရပါးရ လုပ်ဖြစ်တာ၊ ငါဆို ခန ခန ပီးတာ၊ သူလဲ ၂ ခါလား၊ ၃ ခါလားဘဲ၊ အသကုန် ဆော်တာ၊ နောက်ဆုံး အသိဝင်လာတော့ မှ ငါ့ကို ငါ ရှက်ပြီး ငိုလိုက်တာ၊ သူ့ မျက်နှာလဲ မကြည့်ရဲဘူး၊ သူကတော့ ငါ့ကို နင့် အပြစ်မဟုတ်ဘူး၊ သူ့ အပြစ်ပါ၊ သူ ခေါ်လာလို့ ဒီလို ဖြစ်တာ၊ ဘာညာ အတင်း ငါ့ကို ချော့တာ၊ အဲဒီမှာ ငါတို့ ၂ ယောက် နောက်ထပ် ဒီလို မတွေ့ကြတော့ဘူး၊ အဲဒါတွေ မေ့ပြစ်ပြီး သူငယ်ချင်းလို ဘဲ ဆက်နေမယ် ဆိုပြီး သဘောတူလိုက်ကြတာ၊ ပြီးတော့ အပြန်မှာ သူ့ ကို ငါပြောလိုက်တယ်၊ နင့် သူငယ်ချင်းကို ပြောလိုက်ဟာ ငါ့ကို မြန်မြန် ဖွင့်ြေ့ပာလို့၊ ငါ သူ့ကို ရီးစား ထားလိုက်တော့မယ်။ ဒါမှ နင် နဲ့ ငါ ဆက်မဖြစ်တော့မှာ၊ ဆိုတော့ သူကလဲ သဘောတူတယ်၊ ငါ ပြောလိုက်မယ် တဲ့။ တဆယ်။ “အယ် ဂယ်ကြီးလား အမ၊ အမတို့က အဲ့လိုလား” “ထင်တယ်၊ ထင်တယ်၊ အမတို့ ဇတ်လမ်း ရှိခဲ့တယ် ဆိုတာ၊ အမတို့ကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့ သိနေတာ” “အဲဒါ ဇတ်လမ်းလား၊ တကယ်တော့ ငါတို့က သူများတွေလို ရီးစားလဲ ဖြစ်ခဲ့တာ မဟုတ်” “အမ် အဲ့ဒါ ဇတ်လမ်း မဟုတ်ဘူးတဲ့တော့” “မသိဘူးလေဟာ၊ ငါတို့က တယောက်ကို တယောက် ချစ်တယ်လဲ မပြော၊ ရီးစားလဲ မဖြစ်၊ အဲ့ဒါ ဇတ်လမ်းဖြစ်မလားဟ” “ဆက်ပြော အမ” နောက်နေ့ ကျောင်းတက်တော့ သူနဲ့ ငါ နှစ်ယောက်ချင်း မတွေ့မိအောင် ရှောင်လိုက်တယ်၊ သူလဲ ငါ့လိုဘဲ ရှောင်တယ်၊ နင်တို့စဉ်းစားကြည့်လေ အဲလို ပက်ပက်စက်စက် ကြီး ဖြစ်သွားတာ သွေးအေးတော့ ဘယ်လို မျက်နှာ နဲ့ ရင်ဆိုင်ရမလဲဟ၊ ငါလဲ ရှက်သလို သူလဲ ရှက်မှာပေါ့။ ဒါပေမဲ့ဟာ တကယ်တန်း ရှောင်ဖြစ်တာက ကျောင်းချိန် တချိန်ထဲပါ၊
ပြီးတော့ တိုတိုပြောရင် သူ့ အလှော် ကောင်းမှု့နဲ့ ငါနဲ့ သူ့သူငယ်ချင်း ရီးစား ဖြစ်သွားတယ် ဆိုပါတော့၊ ငါလဲ မျက်စိမှိတ်ပြီး ခေါင်းညှိမ့်လိုက်တာ၊ အော် ပြောရအုံးမယ် ငါတို့ ဖြစ်ပြီး တလလောက်ကြာတော့ ထင်တယ် သူ့ က သူ့ရီးစားကို ငါ့လိုဘဲ အိမ်ခေါ်သွားတယ်ဟ၊ ဒါပေမဲ့ဟာ ထင်သလို မဖြစ်ဘူးဟ၊ သူ့ရီးစား ငါ့ သူငယ်ချင်းက သူ့ ကြုံရတဲ့ အဖြစ်ပျက်ကို ငါတို့ကို တိုးတိုးတိတ်တိတ် ပြောပြတယ်လေ။ ကိုလတ်က ကဲ တော့ သူဘဲ စကဲပြီး တကိုယ်လုံး ကျွတ်သွားမှ ဘာမှ မလုပ်ဘဲ သူ့ကို အလှကြည့်ပြီး ထပြန်လာတယ်တဲ့။ လက်မထပ်ခင် အပျိုရည် မဖျက်ချင်ဘူး ဆိုပြီး သူ့ကိုပြောတယ်ဆိုဘဲ။ တခြားသူတွေက ဟုတ်ရဲ့လား ဘာညာ အသေးစိတ် မေးပေမဲ့ ငါက သိနေပြီလေ။ ဟိုကလဲ တကယ်ပါ ငါမလိမ်ဘူး၊ ဘာမှ မဖြစ်ခဲ့တာ ကြိမ်တွယ်ပြောလို့၊ ပြီးတော့မှ ရှက်လိုက်တာဟာ၊ အဲ့ ကိုလတ်ကြီးက ဘာမှန်းလဲ မသိဘူး၊ မလုပ်ဘူး ဆိုလဲ အစကတည်းက မလုပ်ဘဲ နေတာမဟုတ်ဘူး၊ ပြီးတော့မှ ဟဲ့ ငါက အတင်းညင်းနေလို့ သူစိတ်ပျက်သွားတာ လားမသိဘူးနော် ဆိုပြီး ကိုလတ်ကို အပြစ် မမြင်တဲ့ အပြင် သူငယ်ချင်းတွေ ကြားမှာ သူက နာမည်ကောင်းတောင် ရသွားသေး။ အဲဒီမှာ သူနဲ့က အားချိန် ထုံးစံ အတိုင်း ပြန်တွေ့တော့ ငါက မသိချင်ယောင်ဆောင်ပြီး မေးတာပေါ့။ “ကိုလတ်၊ နင်တို့ နှစ်ယောက် နင့်အိမ်မှာ ချိန်းတွေ့တယ်ဆို” “အေး” “အမယ် နင့်အကြိုက်တွေ့သွားပြီပေါ့လေ၊ စောက်ကောင် ငါ့ကိုတောင် မပြောဘဲ လျိုထားတယ်” “မဟုတ်ပါဘူး မဝေဟာ၊ ငါ နင့်ကို ဘယ်လိုပြောရမှန်းတောင်မသိဘူး၊ ငါတို့ ဘာမှ မဖြစ်ခဲ့ပါဘူး” “ဘာလဲ နင် စိတ်မပါတော့ဘူး ပြောမလို့လား” “အေးဟ” “ခု ဘာဖြစ်လို့လဲ၊ ငါ့သူငယ်ချင်းက ချောပါတယ်ဟ” “အေး၊ နင့်သူငယ်ချင်းက ချောတယ်၊ ဒါပေမဲ့ အပြင်ဘမ်းကြည့်ရင် မျက်နှာရော ကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက်ရော တော်တော်လှပါတယ်၊ ငါလဲ ကြိုက်မယ်လို့ ထင်ခဲ့တာ” “ကဲပါ ပြောပါ။
ခု ဘာကို မကြိုက်ရတာတုန်း” “အသေးစိတ်ပြောရမလား” “နင့်ဘိုးအေ၊ အသေးစိတ်မပြောလို့ ဘယ်လိုပြောချင်သေးလို့လဲ” “အေးပါဟ” ငါ့အိမ်ရောက်တော့ သူက ရှက်ကိုးရှက်ကမ်းနဲ့ဟ၊ငါက ဘာမှတောင် မစရသေးဘူး သူက ဟင်အင်းဘဲ ပြောနေတာ၊ ဒါပေမဲ့ဟာ သိတယ်မို့လား၊ ရီးစားချင်းဘဲ၊ ဘာဆိုရင် ဘာဖြစ်မယ် ဆိုတာ သူလဲ သိမှာပေါ့။ ဒီလိုဘဲ တဖြေးဖြေး သူ့ကို ဖက်၊ ဟိုပွတ် ဒီပွတ် လုပ်ရင်း ချစ်တဲ့အကြောင်း တဖွဖွ ပြောရင်း စတာပေါ့။ နင်သိတဲ့ အတိုင်း ငါလိုချင်တာ ငါစိတ်ပါမဲ့ မိန်းမ၊ ဒါပေမဲ့ဟာ အဲလို လုပ်ရင်းတောင် ငါက စိတ်အရမ်း မဖြစ်ဘူးဟ၊ ဒါကတော်တော်ထူးဆန်းတယ်။ ငါနဲ့ရီးစားဖြစ်သွားတာနဲ့ တဖြေးဖြေးသွေးအေးသွားတာ ဘာလို့လဲ မသိဘူး။ ငါလဲ ကြိုးစားတယ်။ နမ်းတာမှ သူ့ကို အသကုန် နမ်းတာ၊ ရှိသမျှ တက်ကနစ်တွေ အကုန်သုံးတာ။ ကြာတော့ သူက နင်းကန်ရွလာပေမဲ့ ငါက ဒီလောက်မဖြစ်ဘူး။ နမ်းပါများတော့လဲ သူ့ တံတွေးအနံ့တောင် ငါရွံသလို ဖြစ်လာတာ၊ နင့်ကိုတော့ အားနာပါတယ်၊ ပြောရရင် နင်နဲ့တုန်းကလို မဟုတ်ဘူး၊ နင့်နဲ့ဆို အသံကြားတာနဲ့ ငါက ထန်နေတာ၊ ဒါနဲ့ ငါက မထူးဘူးဟာ၊ လုပ်မဲ့လုပ် အဆုံးထိ လုပ်ကြည့်မယ် ဆိုပြီး၊ သူ့ အဝတ်တွေ ချွတ်တာပေါ့။ နင်သိတဲ့ အတိုင်း အရင် မိန်းခလေးတွေဆို အဲလို ငါလုပ်လို့ စိတ်မပါတော့ဘူး ဆို ငါ ထပ်မလုပ်ဘူးလေ။ ငါသူတို့ကို နမ်းကြည့်လို့မှ အနံ့အသက် မကြိုက်သလိုလို ဖြစ်သွားတာနဲ့ ငါဆက်မလုပ်ဘဲ ရပ်လိုက်တာ။ ခုကတော့ မထူးဘူးဆိုပြီး အဆုံးထိ စမ်းမယ်ကွာ ဆိုပြီး စမ်းတာ။ အင်္ကျီကျွတ်တာနဲ့ ငါမကြိုက်တာ စတွေ့တာဘဲ၊ သူ့ ချိုင်းက အသားရောင် အတိုင်းမဟုတ်ဘူးဟ၊ မဲနေတာ၊ သိသာတယ်။ ဒါကြောင့် သူလက်ပြတ် အင်္ကျီမဝတ်တာ၊ ငါ သိသိချင်း မကြည့်မိအောင် ကြိုးစားပေမဲ့ မရဘူးဟ၊ ငါ့မျက်လုံးက အဲ့ဒီ ချိုင်းမဲကြီးကိုဘဲ မြင်နေတာ။ ဘာမှ တခြားဟာ လုပ်ချင်စိတ်ကို မရှိတော့ဘူး။
ငါရွံသွားတာ၊ ချိုင်းမဲရင် ပေါင်ကြားလဲ မဲမယ်ဆိုတာ။ ငါထင်တဲ့ အတိုင်းဘဲဟ၊ သူ့ အတွင်းခံ ချွတ်လိုက်နဲ့ ထင်းကနဲဘဲ၊ သိသိသာသာကို မဲနေတာ။ ရင်သားကတော့ လုံးလုံးလေးနဲ့ လှပါတယ်။ အတွေ့အကြုံ မရှိသေးတဲ့ အပျိုနို့စစ်စစ် ဆိုတာကြည့်တာနဲ့ သိတယ်၊ နို့သီးလဲ နဲနဲတော့ မဲသယောင်ယောင်ရှိပေမဲ့ ငါ မကြိုက်တဲ့ အနေထိတော့ မဟုတ်ဘူးဟ၊ ငါ မကြိုက်တာက အဲဒီ ချိုင်းမဲတာနဲ့ ပေါင်ကြားက မဲနေတာ၊ “အနံ့ရော ကြိုက်လား၊ နင်ရှုကြည့်လား” အေး၊ ရှုကြည့်တာပေါ့။ သူ့ကို နမ်းရင်း ချိုင်းကို မသိမသာ ရှုကြည့်တယ်။ စိတ်ထဲက မကြိုက်လို့လားတော့ မသိဘူး။ သူရေမွှေးသုံးပေမဲ့ ငါ ခံစားလို့ မရဘူး။ ငါက လူနံ့ကြိုက်တာ၊ ဒါပေမဲ့ ရေမွှေးနောက်ကွယ်က သူ့ အနံ့က တမျိုးဘဲ။ နင် ရေမွှေး မသုံးဘူး မို့လား “ငါက ရိုးအွန် ဘဲသုံးတာ၊ ရေမွှေးမကြိုက်ဘူး” အေး ဟုတ်တယ်။ နင့် အနံ့ကို ငါ အကြိုက်ဆုံးဘဲ၊ နင်ကိုယ်နံ့ကို အဲ့ ရိုးအွန် က မသိမသာလေး ဖုံးထားတာကို ကြိုက်တာ၊ သူက အဲ့လို မဟုတ်ဘူးဟ၊ ရေမွှေးနံ့က များနေပြီး ကိုယ်နံ့နဲ မလိုက်သလို ဖြစ်နေတာ။ အဲဒီမှာ ငါလဲ ဘာမှ ဆက်မလုပ်ချင်တော့ဘူး။ လုပ်ဘို့လဲ ငါ့စိတ်က မပါတော့ဘူး။ ဒါနဲ့ ငါလဲ ရပ်လိုက်ပြီး သူ့ကို ငါမှားသွားတယ်ပေါ၊ ကံကောင်းလို့ စိတ်အလိုလိုက်မိတော့မလို့ပေါ့။ မိန်းခလေးတယောက်မှာ အပျိုရည်ဟာ အရေးကြီးတယ် ဆိုတာ ငါ မေ့သွားတယ်ပေါ့။
ဘာညာပေါ့ဟာ၊ စကားလှအောင်ပြောပြီး ပြန်လာခဲ့တယ်။ “စောက်ကောင် ဖြစ်ရမယ်၊ နင်ကတော့လေ” “အေးဟာ၊ ငါလဲ ငါ့ကိုငါ စိတ်ပျက်တယ်၊ ပြီးတော့ဟာ နင့်ကို ပြောအုံးမယ်” “ဘာကိုလဲ” “နင်နဲ့ ငါ ကိစ္စပါ” “နင် နော် နင်၊ ငါတို့ မေ့လိုက်ကြမယ် ပြောပြီးသား၊ အစမဖေါ်နဲ့” “နင်က မေ့နိုင်လို့လား၊ ကိုယ့်ကိုကိုယ် မညာချင်စမ်းပါနဲ့မဝေရာ၊ ငါ့စိတ်ထဲမှာ သိနေတယ်၊ ဘာဖြစ်လဲ စိတ်တူကိုယ်တူ၊ နင်သတ္တိ မရှိဘူးလား” “ဘာ” “မ ဘာ နေနဲ့၊ ငါ ရှင်းရှင်းပြောမယ်၊ အခု နင်လုပ်တာ ခံချင်နေတာ၊ မဝေ ပြော နင် ငါ့ကို နင့်စိတ်တိုင်းကျ မလုပ်ချင်ဘူးလား” “အေး လုပ်ချင်နေတာဟဲ့၊ လုပ်ချင်နေတာ၊ တပတ်လောက်ရှိပြီ၊ စောက်ကောင်၊ နင့်ကို အသေသတ်ချင်နေတာ၊ နင့်ကို မြင်နေရတာ ငါ့စိတ်ထန်တယ်” “အေး၊ အဲ့လို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း သတ္တိရှိစမ်းပါ၊ ငါလဲ နင့်ကို မြင်နေရတာ ထန်တယ်။ အောင့်ထားတာ ဘယ်လောက်ကြာပလဲ နင်သိလား၊ သတ်ဟာ၊ လာ ခု သွားမယ်၊ သတ်၊ သတ်၊ ငါ့ကို သေအောင်သတ်” ဆယ့်တစ်။ ကဲ ငါတို့ အဖြစ်အပျက်က ဒါဘဲ၊ အဲဒီကနေ စပြီး သူနဲ့ငါ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဖြစ်သွားတယ်။
ဒီရက်ပိုင်း မြန်မာအသစ်တွေက ​တော့ နေ့စဉ်ကိုထွက်နေတာဗျ။ အရင်ကချိန်းမ ​တွေရဘဲ အိမ်တွင်းအောင်းတွေ ခုမှ အပြင်ထွက်ပြီးကဲနေကြတာဗျို့။ ကဲ App မှာတော့ ထုံစံအတိုင်းလင်းပြီဗျာ။ 👇👇👇👇👇👇👇 ကြည့်မယ်ဆိုရင် အောက်က Link ​လေးကို နှိပ်ပြီး ဒေါင်းလိုက်ေ
အပြာကား အောကားဆော့ဝဲလ် ဒေါင်းရန် Link
အပြာကား အောကား App ဒေါင်းရန် Link
ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ သူ့ အပြောအရ ငါက သူ့ကို စိတ်ပါအောင် အဆွဲဆောင်နိုင်ဆုံးပေါ့၊ သူ ငါ့ကို လက်ထပ်ချင်တယ် ဆိုတဲ့ အထိ ငါ့ကို ပြောဖူးတယ်။ “ဟယ် မဝေရာ၊ နင်ကလဲ သူ့ကို ကြိုက်ရဲ့သားနဲ့ ဘာလို့ လက်မခံတာလဲ” “ဘာလို့ လက်မခံတာလဲ သိလား၊ ဟင်း ဟင်း ဟင်း ဟင်း (မဝေကရီရင်း)၊ ငါ လက်ခံချင်တာပေါ့ဟ၊ သူပြောလိုက်တိုင်း ငါ့မှာ ခေါင်းညှိမ့်ချင်စိတ်ကို မနဲထိမ်းထားထားရတာ၊ ဒါပေမဲ့ လက်ခံလို့ မဖြစ်ဘူး ဆိုတာ ငါသိနေတယ်။ ငါတို့ ၂ ယောက်ကြားက ခုလို ဖြစ်နေတဲ့ အရာကို ငါ မဆုံးရှုံးချင်ဘူး၊ ဒါကြောင့် ငါ့ကိုငါ အတင်း အားတင်းပြီး ရှေ့ဆက် မတိုးတာ” “ဘာဖြစ်လို့လဲ၊ ရီးစားဖြစ်သွားရင် တခြားမိန်းခလေးတွေလို အမကို ပြစ်သွားမှာ စိုးလို့လား” “သေချာတာပေါ့ဟ၊ နင်တို့ထင်သလို ငါက သူ့ အကြိုက်ဖြစ်နေတယ် ထင်လို့လား၊
ငါ့မှာ သူ့အကြိုက်ဘာမှ မရှိဘူး၊ သူနဲ့ ရီးစားဖြစ်သွားရင် ခုလို သူ့ကို သစ်တုန်းလို ငါသဘောထားလို့ ရတော့မလား၊ ငါ့ မှာ သူ့ အကြိုက်ဆိုလို့ အနံ့တခုဘဲ ရှိတာ၊ ငါ့ ခန္တာကိုယ်မှာ သူ အကြိုက် ဘာမှ မရှိဘူး။ ငါက တကိုယ်လုံး ချွတ်လိုက်ရင် လှတဲ့ အကွက်ဘာမှ မရှိဘူးဟ၊ ငါ ငယ်ငယ်က အနာတွေ ပေါက်ပြီး အနာရွတ်တွေက တင်ပါးမှာရော၊ ပေါင်မှာရော၊ ဘိုက်မှာရော ငါ့တကိုယ်လုံး ပြည့်နေတာ၊ ပြီးတော့ သူမကြိုက်တဲ့ အရာတွေ တော်တော်များများက ငါ့မှာ ရှိတာ။ တကယ်လို့ ကိုလတ်သာ ငါ့ တကိုယ်လုံး ကို မြင်သွားတာနဲ့ စိတ်ပျက်သွားမှာပေါ့ဟ၊ အဲလိုဖြစ်သွားမှ ပိုရင်ကျိုးမှာ၊ ခုလို ပုံစံဆိုတော့ သူ့အတွက်လဲကောင်း ငါ့အတွက်လဲ အဆင်ပြေ၊ ငါ့ သဘောက လောဘကြီးလို့ ဆုံးရှုံးတာထက် စာရင် လိုချင်တဲ့ အပိုင်းလေးဘဲ ကွက်ယူပြီး ကြေနပ်တင်းတိမ်ရတာကို ပိုသဘောကျတယ်ဟ။ ဟင်း ဟင်း ဟင်း ဟင်း ပြီးပါပြီ။
Previous Previous post: ထိုင်း ချဲလ်(၃) လုံးထီ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှု “(ကံကောင်းကြပါစေ)။ မကြည့်အားသေးရင် ရှယ်ယူထားလိုက်ပါ
Next Next post: တိရိစ်ဆာနျဥယြာဉျကို သှားရောကျလညျပတျကာ တိရိစ်ဆာနျလေးတှကေို အစာကြှေးရငျး ပြျောနကွေတဲ့ အိအိတုံတို့သားအမိ